”Annagu masaajidda weerar kuma nihin balse ciddi naga gashaa waan ka daba galaynaa”, Gen, Muxiyadiin Axmed Muuse. – Radio Daljir
Diseembar 1, 2012 5:12 b 0
Gaalkacyo, 01-Dec- Kulan maanta gudoomiyaha gobolka Mudug iyo taliye ku xigeenka ciidanka booliska PL Gen, Muxiyadiin Axmed Muuse ayay kaga warbixiyeen hawl-gallo dhawrkii maalmood ee ugu danbeeyay ay ka wadeen magaalada Gaalkacyo.
Gen, Muxiyadiin oo hadalka ku horeeyay ayaa sharaxay qaababkii ay u hawl-galyeen ciidanka ammaanka iyo goobihii ay sida gaarka u tageen, taliyaha ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan in badan oo ka mida kooxihii madax jabinta ee Alshabaab u joogay gobolka in kalana ay ku daba joogaan, isagoo geesta kalana sheegay in la sii daynayo cid walboo danbi lagu waayo baaritaano iyo su’aalo waydiin ka dib, taliyaha ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay lacagaha been abuurkaa ee gobolka ku jiro iyo tallaabooyin ay maanta arintaasi ka fuliyeen saraakiisha ammaanka.
Jenenka ayaa hoosta ka xariiqay in xasilin ammaan oo kaliya iyo soo qab-qabasho dad ay doonayeen maamulka oo kaliya lagu galay masjidka Salaaxu-diin ee xaafadda Garsoor oo dhawaan laga soo qab-qabtay dad badan, wuxuuna hadalkiisa intaasi ku daray in masjid kasta iyo goob walba oo ay ku tuhmaan ama loogu soo sheego dhagar-qabayaasha inay u hawl-galayaan, hase ahaatee Jenenku wuxuun carabaabay inay jiraan dad u fasirtay arintaas diin la dagaalan.
” War anagu la dagaalami mayno masaajidda, dadka cibaadaysanaya iyo culimada kutubta akhrinaysa waxaynu daba joognaa xubno Alshabaaba meel walboo ay galaana waan ka daba galaynaa,”Ayuu Yiri Taliyuhu.
Dhanka kale gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac oo isaguna xoojinayay hadalka taliyaha ayaa si ballaaran ugu mahad celiyay hawsha adag ee ay hayaan ciidanka ammaanka ee gobolka joogay, isagoo soo hadal qaaday tan iyo markii magaalada ay yimaadeen ciidanka ka socda dawladda dhexe inay yaraadeen dilalkii iyo baqdintii waxgaradka ay qabeen.
Gudoomiyaha ayaa shacabka ugu baaqay shacabka inay la shaqeeyaan ciidanka, wuxuu kaloo soo hadal qaaday inaysan jiri doonaan Gaalkacyo oo laga maleego amni darrada PL iyo jid ay maraan kooxaha dilalka qorshaysan ka fuliyo PL.
Kulankan maanta ay ka hadleen xaaladaha amni ee Gaalkacyo saraakiisha amniga PL iyo maamulka gobolka ayaa ku soo aadaya xili ciidanka ammaanka muddooyinkii ugu danbeeyay ay wadeen hawl-gallo lagu adkaynayo amniga ka dib markii dhawaan Gaalkacyo lagu dilay ganacsade caana.